Tababare Pep Guardiola Oo Mar Kale Iska Fogeeyay Shaqada Kooxda Chelsea. - jornalizem
Macalinka ka sii socda kooxda Barcelone Pep Guardiola ayaa markale waxaa albaabkiisa soo garaacay codsi ah 12 million oo euro sanadiiba oo uga yimid Milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich, hase yeeshee Guardiola ayaa sheegay inuu gali doono fasax hal sano ah. Sida ay maanta qortay jariirada Daily Mirror.
Macalinka reer Italy ayaa intii uu joogay kooxda ku hogaamiyay in uu u qaado koobka loo yaqaan FA iyo waliba final-ka Champion League oo ay la ciyaari doonaan kooxda Bayern Munich, waxa kale oo muuqata inay fursad u heystaan in ay kamid noqdaan afarta kooxood ee ugu sareeya Premier League taas oo u sahlaysa inay sanadka danbe ka qayb galaan Champions League ka hadii kan laga badiyo.
Inkasta oo uu Pep sheegay inuusan xiisaynayn shaqada Chelsea xitaa hadii u noqonayo macalinka ugu lacagta badan dunida, hadana Chelsea ayaa isku dayday in markale ay tijaabiso nasiibkeeda, balse waxaa cad in ay ku guul daraysteen inay heshiis la galaan Guardiola.
Sikastaba ha ahaatee ciyaartoyda Chelsea ayaa doonaya in shaqada loo dhiibo macalinka kumeel gaarka ah Di Matteo